သင်ဟာ ချိုင်းလိမ်းဆီ (Roll-on) သုံးတဲ့ သူ ဆိုရင် မဖြစ်မနေဖတ်ထားသင့်တယ်… - HARTHANANTAW
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေကို တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll on)နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်တွေအကြောင်း ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် …. ။
ရေချိုးပြီး ချက်ချင်း ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on) ကို အသုံးမပြုသင့်ဘဲ ရေစင်အောင် သုတ်ပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ် … ။ ချွေးထွက်မှုကိုလျော့ချပေးနိုင်တဲ့ ချိုင်းလိမ်းဆီ (Roll-On) တွေဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့အရေပြားပေါ်မှာသာ အသုံးပြုဖို့ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။
ချိုင်းမွေး ရိတ်ပြီး/နုတ်ပြီး ချက်ချင်း ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on)ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူးနော် …. ။ အဓိကအားဖြင့် ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on)များတွင် အရက်ပျံပါဝင်မှုများစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အမွှေးရိတ်ထားတဲ့အရေပြားကို နာကျင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် … ။
မနေ့က အသုံးပြုထားတဲ့ ချိုင်းလိမ်းဆီအလွှာတွေကို သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ဘဲ ထပ်မံအသုံးပြုတြာကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ် … ။
ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းတဲ့ အရေပြားပေါ်မှာပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on)များကို အထပ်ထပ်အသုံးပြုခြင်းဟာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု လျော့နည်းစေတဲ့အပြင် အရေပြားပေါ်တွင် အညစ်အကြေး(ဂျီး)အလွှာတေါကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် … ။
သင်အသုံးပြုတဲ့ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on) အမျိူးစားပေါ်မူတည်ပြီး နေ့တိုင်းအသုံးပြုဖို့ လို/မလိုကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ် … ။ တချို့ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on) တေါဟာ ၄၈နာရီအထိတာရှည်ခံအောင် ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် နေ့တိုင်းအသုံးပြုဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနော် …. ။
ချွေးထွက်မှုလျော့နည်းသွားပြီး စိုစွတ်မှုမရှိတော့တဲ့ ညနေခင်းရေချိုးပြီးအချိန်မှာ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on)အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျန်အချိန်တွေမှာ အသုံးပြုခြင်းထက် အကျိုးအာနိသင် ပိုမိုရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on) ရွေးချယ်ရာမှာ ပစ္စည်းရဲ့ကောင်းကွက်ကို ကြည့်ရှုခြင်းထက် သဘာဝပစ္စည်းတွေပါဝင်မှုကိုလည်း အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်နော် … ။ သဘာဝပစ္စည်းအများစုနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on) တွေဟာ အသားအရေ အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ် … ။
တချို့ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-On) တွေက အဝတ်အစားကို စွန်းထင်းစေနိုင်ပါတယ် … ။ ဒါကြောင့် သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll on) အမျိူးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အဝတ်အစားအရောင်ကို ရွေးချယ်သင့်တဲ့အပြင် ချိုင်းလိမ်းဆီ(Roll-on) အသုံးပြုပြီးမှသာ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ် … ။
သငျဟာ ခြိုငျးလိမျးဆီ (Roll-on) သုံးတဲ့ သူ ဆိုရငျ မဖွဈမနဖေတျထားသငျ့တယျ…
ဒီတဈခါမှာတော့ ပရိသတျတှကေို တဈကိုယျရညျသုံးပစ်စညျးတဈခုဖွဈတဲ့ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll on)နဲ့ပတျသတျပွီး သိထားသငျ့တဲ့ ရှောငျရနျ၊ ဆောငျရနျတှအေကွောငျး ဖျောပွပေးခငျြပါတယျနျော …. ။
ရခြေိုးပွီး ခကျြခငျြး ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on) ကို အသုံးမပွုသငျ့ဘဲ ရစေငျအောငျ သုတျပွီးမှ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ … ။ ခြှေးထှကျမှုကိုလြော့ခပြေးနိုငျတဲ့ ခြိုငျးလိမျးဆီ (Roll-On) တှဟော ခွောကျသှတေဲ့အရပွေားပျေါမှာသာ အသုံးပွုဖို့ ထုတျလုပျထားခွငျး ဖွဈပါတယျနျော …. ။
ခြိုငျးမှေး ရိတျပွီး/နုတျပွီး ခကျြခငျြး ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on)ကို အသုံးမပွုသငျ့ပါဘူးနျော …. ။ အဓိကအားဖွငျ့ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on)မြားတှငျ အရကျပြံပါဝငျမှုမြားစှာရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ အမှေးရိတျထားတဲ့အရပွေားကို နာကငျြမှုမြားဖွဈပျေါစပေါတယျ … ။
မနကေ့ အသုံးပွုထားတဲ့ ခြိုငျးလိမျးဆီအလှာတှကေို သနျ့ရှငျးရေးမလုပျဘဲ ထပျမံအသုံးပွုတွာကို လုံးဝရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ … ။
ခွောကျသှသေ့နျ့ရှငျးတဲ့ အရပွေားပျေါမှာပဲ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on)မြားကို အထပျထပျအသုံးပွုခွငျးဟာ အကြိုးဖွဈထှနျးမှု လြော့နညျးစတေဲ့အပွငျ အရပွေားပျေါတှငျ အညဈအကွေး(ဂြီး)အလှာတေါကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ … ။
သငျအသုံးပွုတဲ့ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on) အမြိူးစားပျေါမူတညျပွီး နတေို့ငျးအသုံးပွုဖို့ လို/မလိုကို စဉျးစားသငျ့ပါတယျ … ။ တခြို့ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on) တေါဟာ ၄၈နာရီအထိတာရှညျခံအောငျ ဖနျတီးထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ နတေို့ငျးအသုံးပွုဖို့မလိုအပျပါဘူးနျော …. ။
ခြှေးထှကျမှုလြော့နညျးသှားပွီး စိုစှတျမှုမရှိတော့တဲ့ ညနခေငျးရခြေိုးပွီးအခြိနျမှာ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on)အသုံးပွုမယျဆိုရငျ ကနျြအခြိနျတှမှော အသုံးပွုခွငျးထကျ အကြိုးအာနိသငျ ပိုမိုရရှိနိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ … ။
ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on) ရှေးခယျြရာမှာ ပစ်စညျးရဲ့ကောငျးကှကျကို ကွညျ့ရှုခွငျးထကျ သဘာဝပစ်စညျးတှပေါဝငျမှုကိုလညျး အထူးဂရုပွုသငျ့ပါတယျနျော … ။ သဘာဝပစ်စညျးအမြားစုနဲ့ ထုတျလုပျထားတဲ့ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on) တှဟော အသားအရေ အမြိုးမြိုးအတှကျ သငျ့တျောပါတယျ … ။
တခြို့ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-On) တှကေ အဝတျအစားကို စှနျးထငျးစနေိုငျပါတယျ … ။ ဒါကွောငျ့ သငျအသုံးပွုနတေဲ့ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll on) အမြိူးအစားပျေါမူတညျပွီး အဝတျအစားအရောငျကို ရှေးခယျြသငျ့တဲ့အပွငျ ခြိုငျးလိမျးဆီ(Roll-on) အသုံးပွုပွီးမှသာ အဝတျအစားတှကေို ဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ … ။